Cudurka Daacuunka: Sidee xal waara loogu heli karaa ka hortagiisa? Dr. Yasin Abdi | ToggaHerer
← Daawo: ” Dhalinyaradani Waa Somaliland Oo Ruux Noqotay Waayo Way ku dhasheen, Wax ku barteen, kana shaqeeyeen Hadii la odhan jiray Madaxdii Bari maanta waa madax Intii Ay meelahaas inaga caayi lahaayeen Dhagta ayey wax inoogu Sheegayaan” Wasiir Cukuse
Farasku Ma’gallo Amaano Dumar Qoraa/Maxamed Faarax Qoti →
Cudurka Daacuunka: Sidee xal waara loogu heli karaa ka hortagiisa? Dr. Yasin Abdi
Published on April 19, 2017 by Magan
Meelo badan oo ka mid ah koonfurta Soomaaliya iyo goobaha abaaruhu ku habsadeen ayaa la soo sheegayaa inuu ka dillaacay cudurka Daacuunku dhowaan. Aagagga qaarkood waxa la xaqiijiyey in dad ugu geeriyoodeen gaar ahaan goobo ka mid ah gobolka Bay. Xukuumadda Soomaaliya ayaa adduunka u sheegtay in cudurka Daacuunka lagu arkay Koonfurta Soomaaliya sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dalka Shiinaha (Xinhua) 4tii bisha Maarso 2017 iyo qoraal kale oo ay dhowaan baahisay Outbreaknewstoday.com. Tvga Aljazeera ayaa toddobaadkii hore sii daayey warbixin ka hadlaysa halista cudurka Daacuunku ku hayo dalka Soomaaliya. Halkan hoose riix si aad u akhrisatid/daawatid wararkaas.